China 310s eshushu liqengqiwe ipleyiti steel stainless Ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Sino Stainless Capacity malunga I-310s ishushu liqengqiwe intsimbi engenasici ipleyiti, i-310s HRP, PMP
Ububanzi: I-600mm-3300mm, iimveliso ezincitshisiweyo pls jonga kwiimveliso zomtya
Ubunzima Pallet: I-1.0MT-10MT
310 / 310s inqanaba elifanayo kumgangatho owahlukileyo
1.4841 S31000 SUS310S 1.4845 S31008 S31008S 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 iqondo lobushushu eliphezulu insimbi
S31008 Chemical icandelo ASTM A240:
C: ≤ 0.08, Si: ~ 1.5 Mn: ≤ 2.0, Kr: 16.00～Ngo-18.00, uNi: 10.0～14.00, S: .00.03, P: .0.0I-45 Mo: 2.0-3.0, iN0.0
S31008 oomatshini impahla ASTM A240:
Umahluko ushwankathelwe ngolu hlobo lulandelayo:
1. Ukwenziwa kweekhemikhali ngu-310. Umxholo wekhabhoni yi-0.15% kwaye imfuno ye-310S yi-0.08%. Ukongeza, ikwafuna ukuba icandelo le-MO libe ngaphantsi okanye lilingane ne-0.75%.
2. Umphezulu wobulukhuni ngokwamandla. 310 mkhulu kuno-310S
3. Ukuchasana nokubola kwe-310S kukhulu kune-310 kuba i-310S yongeza i-MO
4. Ukuchasana kobushushu obuphezulu i-310S yeemeko ezifanayo zokulungisa kungcono kune-310
Ezinye ezahlukileyo phakathi kwentsimbi eshushu eqengqelekileyo kunye nengqele eqengqwe insimbi
Ngokwenkcazo, ii-ingots zentsimbi okanye iibilets zinzima ukukhubazeka kubushushu obuqhelekileyo kwaye kunzima ukuzilungisa. Ngokubanzi, bayafudunyezwa ukuya kwi-1100 ukuya kwi-1250 ° C yokuqengqeleka. Le nkqubo yokuqengqeleka ibizwa ngokuba kukuqengqeleka okushushu. Uninzi lweentsimbi ziqengqeleka ngokuqengqeleka okushushu. Nangona kunjalo, kuba umphezulu wentsimbi uthambekele kwisikali se-oxide yesinyithi kubushushu obuphezulu, umphezulu wentsimbi eshushu-eroliweyo irhabaxa kwaye ubungakanani buguquka kakhulu. Ke ngoko, intsimbi enobuso obugudileyo, ubungakanani obuchanekileyo kunye neempawu ezifanelekileyo zoomatshini ziyafuneka, kunye neemveliso ezigqityiweyo ezishushu okanye iimveliso ezigqityiweyo zisetyenziswa njengezinto ezingafunekiyo emva koko kubanda. Imveliso yendlela eqengqelekayo.
Ukuqengqeleka kubushushu obuqhelekileyo kuqondwa njengokubanda okubandayo. Ukusuka kwindawo yokujonga i-metallographic, imida yokuqengqeleka okubandayo kunye nokuqengqeleka okushushu kufuneka yahlulwe ngobushushu bokusetyenziswa kwakhona. Oko kukuthi, ukuziqengqa okuphantsi kuneqondo lokushisa kwakhona kukuqengqeleka okubandayo, kunye nokuqengqeleka okuphezulu kunobushushu bokusetyenziswa kwakhona kukugungqa okushushu. Isinyithi sinobushushu bokuphinda kusetyenziswe kwakhona i-450 ukuya kwi-600 ° C.
Ukuqengqeleka okushushu, njengoko igama lisitsho, ineqondo lobushushu eliphezulu lesiqwenga esityikityiweyo, ke ukuxhathisa kwe-deformation kuncinci kwaye kunokufunyanwa isixa esikhulu. Ukuthatha lothuli sheet sheet sentsimbi njengomzekelo, Ebubanzini eqhubekayo eyahlulayo blank ngokubanzi malunga 230 mm, kwaye emva kokubaqengqeleka erhabaxa ugqibezele ukuziqengqa, ukutyeba lokugqibela yi-1 ukuya kuma-20 mm. Kwangelo xesha, ngenxa yobubanzi obuncinci beplate yensimbi, imfuneko yokuchaneka kokuphantsi iphantsi kakhulu, kwaye ingxaki yemilo akukho lula ukuyenzeka, kwaye ukuhanjiswa kuyalawulwa ikakhulu. Kwiimfuno zombutho, ngokubanzi kufezekiswa ngokulawulwa ngokulawulwa kunye nokupholisa okulawulwayo, oko kukuthi, ukulawula ubushushu obuqengqelekayo, ukugqiba ubushushu bokuqengqeleka kunye nobushushu becrimping bokugqitywa kokulawula ukulawula ubume bezinto ezincinci kunye neepropathi zoomatshini.
Ukuqengqeleka okubandayo, ngokubanzi akukho nkqubo yokufudumeza ngaphambi kokuqengqeleka. Nangona kunjalo, ngenxa yobunzima obuncinci bomtya, imilo yeplate iyenzeka ukuba yenzeke. Ngapha koko, emva kokuqengqeleka kubanda, iyimveliso egqityiweyo, kwaye ke, ukwenzela ukulawula ukuchaneka komlinganiso kunye nomgangatho wobuso bomtya, iinkqubo ezininzi ezinzima ziyasetyenziswa. Imveliso yokuqengqeleka ebandayo inde, izixhobo zininzi, kwaye inkqubo inzima. Njengoko iimfuno zomsebenzisi zokuchaneka komlinganiso, ubume kunye nomgangatho wobuso bomtya ziphuculwe, imodeli yolawulo, iinkqubo ze-L1 kunye ne-L2, kunye neendlela zolawulo lweemilo zokusila okubandayo kushushu. Ngapha koko, ubushushu bemiqolo kunye nesiqwenga sesinye sezibonakaliso zolawulo ezibaluleke ngakumbi.
Imveliso eqengqelekayo ebandayo kunye nephepha lemveliso elishushu elihlukileyo kwinkqubo eyahlukileyo nakwinkqubo elandelayo. Imveliso esongwayo eshushu yinto ekrwada yemveliso eqengqelekayo ebandayo, kwaye i-coil yentsimbi eqengqelekileyo eshushu iqhutywa yinkqubo yokuchola. Amatye okusila aqengqelekayo, aqengqelekayo, ayabanda-ayilwa, ubukhulu becala ukuqengqa ifomu eshinyeneyo eshushu-liqengqiwe kwiimakhishithi ezibhityileyo-gauge ebunjiweyo, ihlala i-0.3-0.7mm ngokuqengqeleka okushushu kwibhodi yokuqengqeleka kwe3.0mm. Ingqele eqengqelekileyo yekhoyili, umgaqo oyintloko kukusebenzisa umgaqo wokukhupha ukunyanzelisa i-deformation
Egqithileyo Ipleyiti yesinyithi eshushu engenanto i-309
Okulandelayo: 316L 316 eshushu liqengqiwe ipleyiti steel stainless